Gudoomiyaha gobolka Sanaag oo kormeeray fariisimaha ciidanka Daraawiishta Puntland (Dhegayso). – Radio Daljir
Nofeembar 27, 2012 8:06 b 0
Badhan, Salaasa Nov 27, Gudoomiyaha gobolka Sanaag ee Dawlada Puntland Md Maxamuud Jaamac Ismaaciil iyo wafti uu hogaaminayo ayaa saaka kormeeray fariisimaha ay degan yihiin ?ciidamada Daraawiishta Puntland oo adkaynta xuduudaha loo geeyey deegaano hoostaga goboladda Sanaag iyo Hayland.
Gudoomiyaha oo u waramay Barnaamijka Xulashada ee duhur walba ka baxa Radio Daljir ayaa sheegay in ciidamadu xiligan kusugan yihiin xuduudaha Puntland gobolka Sanaag kala wadaagto maamulka Somaliland kuwaasoo uu sheegay inay waajib kooda gudanayaan hadii lagu soo xadgudbo dhulka Puntland sida uu hadalka u dhigay.
“Anagu waxaan u tagnay ciidamada inaan dhiiri gelino una mahadcelino hawsha ay hayaan oo ah waajib kooda” ayuu yiri Maxamuud Jaamac Ismaaciil gudoomiyaha gobolka Sanaag.
Gudoomiyaha oo la weydiiyey waxa uu yahay qorshaha ciidanka Puntland ee halkaasi hada la geeyey ayaa sheegay inay adkaynayaan xuduuda gobolka lana socdaan dhaq dhaqaaqa cadoga sida uu sheegay.” Waxaa u qorshaysan inay dalkooda ilaaliyaan wuxuu kusoo xadgubana eryaan xuduudahana sugaan” ayuu raaciyey hadalkiisa.
Gobolka Sanaag iyo Hayland waxaa ka jira maalmihii u danbeeyey dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhashay arimaha doorashooyinka maamulka Somaliland, Deegaano badan oo goboladaasi kamid ah waxaa shalay la geeyey ciidamo ka tirsan Daraawiishta Puntland kuwaasoo Puntland sheegtay inay ka hortegayaan Faralinta maamulka Somaliland ku hayo dhulka Puntland.